Sheekh Axmed Shaakir (Abuu Ashbaal) | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Taariikhda sheekh Axmed Muxammed Shaakir
Ash-Shaykh Al-Muxaddith Axmed Muxammed Shaakir waxa uu ku dhashay magaalada Qaahira, ee dalka Masar, markuu sanadku ahaa 1309hj, bisha Jamaadul-Aakhir. Aabihii Muxammed Shaakir wuxuu ahaa Caalim reer Azhar ah wuxuuna ka soo qabtay wadanka xilal Diineed oo kala duwan sida: Wakiilka jaamacatul azhar. Bishii Maarso /1900 ayuu Muxadithku ula safray aabhii dalka Suudaan , ayadoo loo magacaabay inuu ka noqdo garsoore ama Qaadi ,da’da Sheekhuna markaas waxay ahayd 8 jir.
Waxaa la geeyay kulliyad lagu magacaabo (gordon) si uu uga barto asaaska shareecada iyo Culuumta Diinta. Waxa ay u soo laabteen asaga iyo aabihii wadankoodii hooyo ee Masar taarikhdu marka ay aheed 26/4/1904. Sheekh Axmed Shaakir waxa uu ku biiray Mac-hadka Askandariya , waxaana Sheekh ka ahaa mac-hadka aabihii Muxammed Shaakir .
Taariikhdu markay ahayd 29/4/1909 ayuu aabihii keenay Magaalada Qaahira si uu u haleelo Culimada Azhar cilmina uu ogu qaato.
Sheekh Axmed Shaakir waxa uu bartay qeybaha kala duwan ee Diinta Islaamka sida Uusuulul fiqhiga, waxaana baray sheekh Muxammed Abuu Daqiiqa, oo kamid ahaa Culimada Mac-hadka Askandariya, sidoo kale wuxuu xubinna ka ahaa Culimada wadanka Masar.
Culimada uu ka qaatay Cilmiga:
Aabihii Muxammed Shaakir, kitaabada uu ka qaatay waxaa kamid ah:
Sheeikh Muxammed Al-Amiin Ash-Shanqiidi Sayyid CabdulAllahi Bin Idris As-Sunuusiy Sheekh Muxammed Rashiid Ridaa iyo Culima kale oo fara badan.
Sheekh Axmed Shaakir waxa uu ka dhigtay jaamacada Azhar Madhabka Xanafiga wuxuuna ka noqday qaadi ama garsoore , lakin wuu ka fogaa in uu ku tacasubo Madhabkiisa, wuxuuna u laaban jiray Kitaabka, Sunnada iyo aqwaashii Culimadi Salafka.
Arintaasna waxaa daliil u ah oo ku tusinaya taxqiijinta muxadithku ee kitaabka (Alrisaala) ee Imaamu Shaafici (Raxmatullahi calayhi) waxa uuna ku cadeeyay inuu ka fogyahay tacasub ama u hiilin waxa looyaqaan.
Sheekh Axmed Muxammed Shaakir waxa uu alifay kitaabo aad u fara badan ,sidoo kale wuxuu tacliiq ama sharax saaray kutubo fara badan.
Kutubta uu taxqiiqiyay
مسند ابن حبان
للترمذي الجامع الصحيح جماع العلم للشافعي
Sheekhu wuxuu qabay fikirka ah in xisaabta xidigaha ay tahay in lagu dhiso bilowga bilaha Carbeed , iyadoo uu khilaafsanaa aragtida shaqsiga ee uu arkaya bisha.
Waxaa jirtay qiso dhex martay aabihii iyo sheekh lagu magacaabi jiray sheekh Muxammed Mustafa Almaraaqi ahaana Sheekha azhar, wuxuuna fatwooday in bilaha lagu dhiso xisaabta xidigaha waxaa khilaafay Culimo aad u badan uu ka mid ahaa sheekha aabihii .
Sheekh axmed shaakir waxa uu raacay aabihii kuna taageeray fikirka ah in aragtida ay ka horeyso tirinta xidigaha.
Lakin muda dheer ka dib waa uu ka laabatay wuxuuna cadeeyay in sheekii azhariga ahaa uu ku saxsanaa, tahayna in lagu dhiso bilaha xisaabta xidigaha .
Shaqooyinkii uu soo qabtay sheekhu
Kadib markuu helay shahaadadi caalamiga ahyd ee Dr waxaa loo magacaabay mac-hadka Cuthmaan Maahir mudo 4 bilood ah, Kadibna waxa uu u soo wareegay qeybta Qadaha ama garsoorka Sharciga ah, illaa uu ka gaaro inuu noqdo garsoorihii ugu sareeyay.
Ugu dambeyn wuxuu kamid noqday xubin kamid ah maxkamada sare .Waxaa laga fariisiyay shaqada 1952, sababtuna waxay ahayd asagoo gaaray sanadkii hawl gabnimada lugahana lag qalay.
Intaa wixii ka dambeeyay wuxuu u jeestay inuu dhanka Cilimga, ilaa uu ka geeriyoodo
Waxaa xag Rabbi loo oofsaday taariikhdu markay ahayd, 1377Hj /Dil Qicda Maalin Sabtiya. Allaha u naxaristo sheekh Axmed shaakir wax badan ayuu umada Islaamka kaga tagay ,Allana waxaan uga baryayaa inuu ka abaal mariyo, Aamiin.
Qore: Al faqir illa’llaah ( Xusayn Caydaruus Muxammed ) Like this:Like Loading...
from → Muxadithiinta Casrigan Noolaa/nool, Sheekh Axmed Shaakir
← Sheekhah Kaamilah Alkuwaariy
An-naasikh & Mansuukh →